Manamafy ny « périnée »
Mikainkona ny « périnée » rehefa tonga any amin’ny fahafinaretana faratampony ny vehivavy. Efa fomba iray hitazonana ny fizozoran’ny fivaviana izy io no sady manampy ny vehivavy amin’ny fiterahana. Voasoroka ho azy, noho ilay firaisana ara-nofo ihany koa ny « fuites urinaires ».
Satria miaina fiovana be dia be ny vatana mandritra ny fitondrana vohoka, mety ho fotoana hampidina ny môraly na hampiakatra izany. Ny firaisana ara-nofo dia miady amin’izany, noho izy misoroka ny rarin-tsaina. Voalaza aza fa mampiakatra ny fisainan’ny vehivavy io firaisana ara-nofo io ka zary mampatoky tena azy.
Mamoaka tsiry mpanentana antsoina hoe :“ocytocyne” ny vatan’ny vehivavy rehefa miray ara-nofo. Io tsiry mpanentana io dia mampitony ireo « tension » rehetra amin’ny vatana, mampahita torimaso haingana.
Mazàna no somary very ny lehilahy ao anatin’ny fitondrana vohoka satria ny vehivavy ihany no mitondra ilay rano. Mampifanakaiky kokoa ny mpivady, sy hiainan’ny lehilahy ireo 9 volana ireo, ny firaisana ara-nofo.
Mampahazo aina ny zazakely
Mahatsapa ny fihetseham-po hiainan’ny reniny ny zaza ao an-kibo. Mandrotsirotsy ny zaza ny fikainkonan’ny tranon-jaza, rehefa tonga amin’ilay fahafinaretana faratampony ka mahafaly azy ihany koa.
Satria mitombo ny kibo, miova ny vatana dia lasa manita-kevitra hitady paozy azo hiraisana ara-nofo ny mpivady. Raha miray saina tsara dia vao mainka mampifanakaiky kokoa io fotoana io, indrindra rehefa teraka ilay zaza, ka tsy an-kilabao ilay lehilahy.